Happy Birthday Sithu — MYSTERY ZILLION
March 2009 edited March 2009 in MZ News
ကဲ.. မောင်စည်သူ့ မွေးနေ့ကို ကျွနု်ပ်ကိုယ်တိုင် တင်ကာ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ အချိန်တိုင်း mz ကို အချိန်ပေးနိုင်ပါစေဗျာ... ဟိဟိ :d
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေဗျာ...
ဟီးဟီး အဲ့လိုမှပေါ့ကွယ်။ bot တင်ပေးတဲ့ Happy Birthday လိုချင်ပါဘူး။ လူကိုယ်တိုင်တင်တဲ့ Birthday Wish ပဲ လိုချင်တာဗျာ။
စီစီ လေးမွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျား ........
ခွင့်ရက်စေ့ရင် ပြန်လာခဲ့နော် :6:
Happy Birthday! :36:
အေးကွယ် ပေါက်ပေါက်ရေ ကြွေးစရာရှိတာကြွေးပြီးပြီနော်။ နင့်ကို။
အဟင့် ကျွေးတာကလည်း နံကြားတောင်မကပ်ဘူး .. မရဘူးမနက်ဖြန် ၁၉ လမ်းမှာ လိုက်တိုက်ရမယ် ဒါပဲ ... :14:
ဒေါသတွေကြီးနေတယ်ဆို ဒီလို တော့မလုပ်နဲ ့နော်.......:D
ဖိုးစည် နင် မန်းထပ်လာရင်တော့ ဒီတစ်ပွဲဖိုး မှတ်ထားရမယ်။:D
Happy Birthday ko sithu..
ဟက်ပီး ဘက်ဒေးနော် စူသီလေး.... :d
ဘာမှလည်း မစားရသေးဘူး။ အကြွေးမှတ်ထားမယ်နော်..
ဪ စေတန်ပိုစ်ကိုကိုယ့်အရှေ့မှာတင်ခဲ့တာဆုတောင်းတော့ တော်တော်တောင်နောက်ကျသွားပြီ :d စီစီလေးရေ ယခုမွေးနေ့မှသည်နောက်နောင်မွေးနေ့တိုင်းချစ်သူအသစ်ရပါစေ။ တစ်နှစ်တစ်ယောက်ပေါ့ စတာပါ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ။
မောင်စည်သူ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ စိတ်ချမ်းသာပါစေဗျာ။ mz အကျိုးများ ဆထက်တိုးလို့ အကျိုးပြုနိုင်ပါစေဗျား။
Happy Birthday to you, Ko Si Thu:)
ကိုဒီဘီနော် ဒါကတော့ လူကိုသက်သက် ညစ်တာပဲဗျာ။ မထမ်းနိုင်ပါဘူး။ မပြုနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့ ကောင်မလေးမှမဟုတ်တာ။
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ စီစီရေ ... :P
အိုင်ကြီးနဲ့ Alexander ရေ သန့်ဗျာ။ မသန့်ရင်တော့ ရေးဆေးစာပေါ့။ ဟီးဟီး။
March 2009 edited March 2009 Banned Users
မောင်စည်သူ (အက်ဒမင် အငြိမ်းစား(လစာမဲ့)) ကို phpcrazy (အက်ဒမင် အငြိမ်းစား(လစာမဲ့)) က မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းအပ်ပါတယ်ဗျာ ...
မောင်ဥပေက္ခာ wrote: »
ယောက်ခမ အရေမရ အဖတ်မရ လစာမဲ့ အငြိမ်းစား အက်ဒမင် ကြီး ရဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို သမက်ကလေး သောက်သုံးမကျ ၁၀၉/၁၁၀ လစာမဲ့ အငြိမ့်စား အက်ဒမင်လေးက ရရှိတော့ အရမ်းဝမ်းသာမိပါကြောင်း။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် သမီးလေးရော နေကောင်းလာဟင်.....
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ...
မိန်းကလေး မန်ဘာတွေ ကိုကော ဘယ်တော့ ကျွေးမှာလဲ ...
သင်္ဘောသီးထောင်းနဲ့တင်တော့ မရသေးဘူးနော် ....
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့မင်္ဂလာဖြစ်ပါစေ။ :6: :6: :6:
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါစေ
happy birthday ko sithu........
ယခု မင်္ဂလာနေ့မှသည် (အဲ မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ မှားပြီ) :d:d ယနေ့မှစ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘဝအား ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေကြောင်း ကျွန်တော်မောင်တက်လူမှ တည်တည်ခန့်ခန့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ၏။ :63::63::63:
မခဏရေ ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ အမကို 19 လမ်းမှာကြွေးမယ်လေ အမတစ်ယောက်ထဲနော် ပေါက်ပေါက် မပါဘူး။ ပေါက်ပေါက်ကိုတော့ နေ့နံကြေအောင် ဘူးသီအချောင်းကျော်ပဲကြွေးလိုက်ပြီ။
mglukyaw, mmkyioo တို့ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
ဘိုင်နရီရေ ကျေးဇူးကွယ် အဆင်ပြေရင်တော့ နင့် နဲ့ တူတူ ကဲခဲ့တဲ့ နေ့တွေ ကိုမှတ်မိပါသေးတယ်။ မွေးနေ့ ပွဲကို အဲမှာလုပ်ချင်တာ ဟီးဟီး။
မွေးနေ့မှစ... နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ..... :6:
~~~~~ ဟက်ပီဘသ်ဒေး တူးယူ အိမ်သာထဲမှာ အီးရှု..~~~~~~ အပျော်ပါ.. မွေးနေ့မှ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းနဲ့ ခါးညောင်း.. အဲ ခညောင်းပါစေဗျာ.. :d
Happy Birthday !! Buddy !!
Many happy return of the day !!!
Happy Birthday ပါ ကိုစူသီ ... အသက်ရာကျော်ရှည်ပြီး .. ကောင်မလေးရာကျော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ... အဲ ... နိုင်ပါ့မလားမသိဘူး ..:D
Happy Birthday Nyilay Sithu!
Happy Birthday! ပါ ညီလေး:)
happy birthday မင်္ဂလာမွေးနေ ့ပါ ကိုစည်သူ
ကိုဖိုးစည်သူ happy birthday ပါခင်ဗျာ.. :)
ပျော်ရွှင်သောမွေးနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ ... အဲ့ .. အရမ်းတော့ မပျော်နဲ့ဗျာ ...
Happy brother Sithu Aung..
မွေးနေ့မှာသာမက နောင် အသက်ရှင်ရာ ဘ၀တစ်လျှောက် ချစ်သူခင်သူနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရွှေလက်တွဲကာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ :6:
(Public Relation Moderator)
သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ.... များများကြီး အလုပ်လုပ်နိုင်ပါစေ... ချောချောကြီးတွေနဲ့ မညားပါစေနဲ့(ညစာခက်မှာစိုးလို့)....ဘောဘောကြီးဘုရားမှာ ဆုတောင်းပါ...
နာ့ကိုလဲ ဆက်ပြီး ရောင်းစားနိုင်ပါစေ(ကိုကိုရဲပေးတဲ့ သတင်းအရပြောတာ)....
လူစစ်စစ်ကြီးက လက်စစ်စစ်ကြီးနဲ့ ကီးဘုတ်စစ်စစ်ကြီးပေါ်မှာ ရိုက်ပြီး... စက်စစ်စစ်ကြီးကနေ တစ်ဆင့်ပြောတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပဲ...။ ကဲ...။
ဟာ... နာ့ကိုလဲ ကျွေးရမယ်နော်... ဒီလိုမညစ်နဲ့...။
Happy Birthday! ပါဗျာ
ကိုစည်သူရေ..။ ကျွန်တော်တောင်နောက်ကျသွားပြီ။ မနေ့က မီးပျက်လို့မ၀င်လိုက်ရဘူး.။ မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။ အမ်ဇက်အကျိုးကို ဒီ့ထက်မက ဆထက်တပိုးထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ (ဟီးမလိုက်ပြီ.. :d) ယခုနှစ်မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ဆယ်ကမ္ဘာတိုင်အောင် ရှည်ပါစေခင်ဗျာ (အသက်နော်... :d) ကျွန်တော့်ကို် ဘယ်တော့မုန့်ကျွေးမှာလဲ :d
ဒါနဲ့စကားမစပ် ကို ဥပစ်ခါ ကြီး ညီမလေးကဘယ်နှနှစ်တုန်းဗျ:39:
ဟီး ရိုက်ချင်ဇောအားကြီးလို့ smiley မှားသွားတယ် sorry နော်:P
Happy Happy Happy Birthday ပါနော်။:)
အင်တာနက်မသုံး ဖြစ်တာ ကြာသွားလို့ ဆုတောင်းပေးတာနောက်ကျသွားတယ်.:D
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်သောဘ၀က ိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။:103:
Happy B'Day ko sithu
နောက်တောင် ကျနေပြီထင်တယ်.. အစစတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ ကိုစီးသူ ဖြစ်ပါစေ ဗျာ..
Happy Birthday ကိုစည်သူ
:36: Happy Birthday :36:
ကိုစည်သူ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေဗျား
Happy Birthday ပါကိုစည်သူ ယခုလိုဘဲဥ 15 လုံးစားနေရသလို နောက်နှစ်တွေမှာ ဒီထက်ပိုပြီး ဘဲဥ တွေများများစားနိုင်ပါစေဗျား....!!!!:P:67: